ရိုဟင်ဂျာများသိထိုက်သောသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ (အပိုင်း ၅) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရိုဟင်ဂျာများသိထိုက်သောသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ (အပိုင်း ၅)
မြောက်ဦးခေတ်တွင် နန်းတွင်းရှိ မွတ်ဆလင် ၀န်ကြီးများသည် နန်းတက်မည့် အာ(ရ်)ကန်မင်း များအတွက် အကောင်းဆုံးမွတ် ဆလင်ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးများကို နန်းတွင်း အဓိက လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်ခုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပေး ခဲ့ရသည်။ မင်းတို့သည်လည်း ရိုဟင်ဂျာ ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာများကို ပညာရည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ရိုဟင်ဂျာယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားဖြစ်မြောက်ရေးဆိုင်ရာ စာအုပ်စာပေ အရေးအသားများ ထွန်းကားလာရေးအတွက် အစဉ်အားပေးထောက်ခံခဲ့သည်။ နန်းတွင်းထင်ရှားကျော်ကြားသော မွတ်ဆလင် ၀န်ကြီးအ ချို့မှာ ‘Sulaiman, Mujallis, Syed Mussa, Ashraf Khan’ တို့ဖြစ်ကြသည်။ ‘Magan’ သည်လည်း စန္ဒာသုဓမ္မ (၁၆၅၂-၁၆၈၄) လက်ထက် ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Magan ၀န်ကြီးချုပ်က `ရှားရှုဂျား´ ပုန်ကန်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဘက်လိုက်မှု မရှိခဲ့သောကြောင့် သူ၏အလိမ္မာကျော်ကြားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အာ(ရ်)ကန်ဒေသခံတို့သည် ချီးကျူးမကုန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Magan သည် ရှားရှုဂျား´အား ပုန်ကန်ရန်အားမပေးခဲ့သည့်အပြင် သူ့ဘက်မှ ဘက်လိုက်ခြင်းလည်း မပြုလုပ်ခဲ့ပါ။ မြောက်ဦးခေတ် အာ(ရ်)ကန်မင်းတို့သည်လည်း `ရိုဟင်ဂျာ´ကဗျာဆရာများ၊ စာရေးဆရာများအား စာပေပညာ ဗဟုသု တစာအုပ်စာပေများကို ရေးသားရန် အားပေးအားမြောက်ပြုခဲ့ရာ ထင်ရှားသော “Daulat Quazi” နှင့် “Syad Shah Alawl” တို့သည် နန်းတွင်းကဗျာဆရာများဖြစ်သည်။ “Daulat Quazi”သည် ဘာသာ စကားကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ဘာသာစကားတစ်ခုမှ အခြားဘာသာစကားတစ်ခုသို့ လျင်မြန်စွာ ကူးလူး ဆက်ဆံပြောဆို တတ်သော အတတ်ပညာရှင် တစ်ဦးအဖြစ်ထင်ရှားသည်။ သူသည် “အရဗီ၊ ပါရှန်းနှင့် သက္ကတ´´ဘာသာတို့ကို တစ်ဘက် ကမ်းရောက်အောင် ကျွမ်းကျင်သည်။ “Daulat Quazi”၏ စာပေပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကြောင့် ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကား၊ ကဗျာ၊ စာပေရေးရာ၊ ယဉ်ကျေး မှု ထွန်းကားပြန့်ပွားရေးအတွက် ကြီးမားသော အင်အားတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် စိတ်ခံစား ချက်အပြည့်ဖြင့် သီကုံးထားသော (၁၂)လရာသီကဗျာများကို ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ ၄င်းသီချင်း များကို ရိုဟင်ဂျာ ဘာသာစကားဖြင့် ‘Baramasha’ ဟုခေါ်ဆိုပြီး တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော စိန်လုံးပုလဲလုံး ကဲ့သို့ နန်းတွင်းရတနာများဖြစ်ခဲ့သည်။
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတို့သည် အစ္စလာ့မ်အဆုံးအမနှင့် ၄င်းအပေါ်အခြေခံသော လူမှုဆက်ဆံရေး ယဉ်ကျေးမှု အပေါ်တွင် ဘ၀ရပ် တည်နေပြီး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကူးလူးဆက်ဆံရေးစသည်ဖြင့် အရေးဟူသမျှသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဘာသာရေးအပေါ် အခြေခံသော အပြန်အလှန် ကူးလူးဆက်ဆံခြင်းစနစ်ကို အခြေခံဖွဲ့ စည်းထားသည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့သည် အများစုပေါင်းဝတ်ပြုကြသည်။ ဘာသာရေး ၀တ်ပြုဆုတောင်း ပွဲများသည် ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး၊ Symbolism (ခ) ပုံဖော်ရေးဆွဲသော အနုပညာအယူဝါဒနှင့် idolism (ခ) ရုပ်တုကိုး ကွယ်မှုတို့ကို လုံးဝခွင့်မပြုပေ။ ရိုဟင်ဂျာတို့သည် လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်သော အယူဝါဒကို လုံးဝဆန့်ကျင် သူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည် ဘာသာတရားကို အလွန်ကိုင်းရှိုင်းကိုးကွယ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သော သူတော်စင်များကိုကား အလွန်ရိုသေချစ်မြတ်နိုးလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ သေဆုံးသောအခါတွင် ၄င်းတို့၏ဂူ (သို့မဟုတ်) ၄င်းပတ်ပတ်လည်ကို ခိုင်ခန့်သော အကာ အရံ များဖြင့် ဆောက်လုပ်၍ ဘာသာရေးပွဲတော်အနေနှင့် မဟုတ်သော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဂုဏ်ပြု အပ်ခြင်းငှာ ပွဲလမ်းသဘင်များ ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင် မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
အာရေဗျတိုင်းပြည်များနှင့် ပါရှန်းနိုင်ငံတို့တွင် ရေးသားသုံးစွဲခဲ့သော Nask (or) Nasktalik အက္ခရာ တို့ သည် ရိုဟင်ဂျာ တို့၏ စာပေရေးရာ ယဉ်ကျေးမှုကို လွှမ်းမုိုးခဲ့သည်။ အာရေဗျ ဘာ သာဖြင့် ရေးသားသော ကိုရမ် ကျမ်းတော်မြတ်နှင့် အခြားအစ္စလာမဘာသာသာ သနာဆိုင်ရာစာအုပ် စာပေများကို ရေးသားပြုစုရာ တွင် သုံးနှုန်းခဲ့သော Nask အက္ခရာများကို ရိုဟင်ဂျာတို့သည် စာပေရေးရာပြုစုရေး သားရာတွင် သုံးနှုန်းခဲ့သည်။ Floral designs (ခ) ပန်းအလှပုံစံဒီဇိုင်းမျိုးစုံဖြင့် မျက်စိပသာဒရှိအောင် မှန်တံခါးဘောင် များတွင် ရေးဆွဲ ထားသော ရိုဟင်ဂျာလက်ရေးလှစာပေများသည် ရိုဟင်ဂျာများနေထိုင်ရာ နေရာများတွင် ယခုတိုင်ရှားရှားပါးပါးတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဂီတရေးရာတွင်လည်း ရိုဟင်ဂျာ တို့သည် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် Batali ကို တီထွင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၄င်း Batali သည် ကျေးလက်တော ရွာနေ တေးကဗျာဆိုသူတို့၏ သံစဉ်သာဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ထဲမှ ပမာပြရလျှင် ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှ ဦးအလီမိုဒ္ဒိန်သည် ၀မ်းနည်းကြေ ကွဲဖွယ်ရာ တေးကဗျာများကို လှပတန် ဆာဆင်ဆိုတတ်သဖြင့် သောတဆင်ကြားရသူအပေါင်းတို့ မျက်ရည်သွင်သွင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။ Zari (ခ) အလွမ်းသီချင်း များသည်လည်း ကျေးလက်နေပြည်သူပြည်သားတို့အတွက် အလွန်သာယာ ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာ သီချင်း များဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ Baromasha, Batali နှင့် Zari တို့သည် ကျေး လက်နေ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့အတွက် ယခုခေတ် စင်တင်တေးဂီတကြီးများသဖွယ် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေး မှုကို ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်စေသော ပြဇာတ် များဖြစ်ခဲ့ကြ သည်။ ခေတ်အဆက် ဆက် က ရိုဟင်ဂျာ ယဉ်ကျေးမှုပြ ဇာတ်များကို ကျေးရွာများရှိ ရွာပြင်ပ ရိုးပြတ်လယ်ကွင်းပြင်များတွင် ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ရိုးရာပြဇာတ်များကို အထူးသဖြင့် လယ်သမားများ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိ န်နှင့် ကျေးရွာ သူကျေးရွာ သားများ နှစ်စဉ်ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့နိုင်ရန် ညအချိန်တွင် ကျင်းပလေ့ရှိပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကျေး ရွာမှ ဒေသခံပြည်သူတို့သည် တစ်ပျော်တစ်ပါး လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။ အာရ် ကန်ဒေသတွင် အစောပိုင်းကာလများ၌ Qasidas (ကစီဒါ) သီဆိုခြင်းများ အလွန်ခေတ်စားခဲ့သည်။ ထင်ရှားသော ကစီဒါ ဆိုသူအချို့မှာ Alawal, Daulat Qazi, Shujah Qazi တို့အပြင် အခြားနာမည်ကြီး ကဗျာ စာဆိုများ လည်းရှိခဲ့သည်။ အာရ်ကန်မင်းများ၏ နန်းတွင်း အခမ်းအနားများတွင် သဘာပတိ ပြုလုပ်ရာ၌ သူတို့အတွက် ကစီဒါသီဆိုပေးခဲ့ရသော အစီအစဉ်ရှိခဲ့ပြီး၊ ၄င်းသီဆိုမှုများအတွက်လည်း ဘုရင့်နန်းတော်မှ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆုချီးမြှင့်ခြင်းများရှိခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် တင်ပြရလျှင် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတို့သည် ကမန်လူမျိုးမဟုတ်သကဲ့သို့ ဘင်္ဂလီလူမျိုးလည်း မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင် ဖက်အမြင်အုပ်စုများ ပြောဆိုတင်ပြနေသကဲ့သို့ မနေ့တစ်နေ့ကမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ့မှ လာရောက်နေထိုင်ခဲ့သော လူမျိုးတစ်မျိုးလည်းမ ဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့ သည် အာ(ရ်)ကန် (ရခိုင်)ဒေသ တွင် ရှေးပဝေသဏီက အထူးသဖြင့် (၁၀)ရာစုမ တိုင်မီကပင် မှီတင်းနေထိုင်လာခဲ့သော (ဘင်္ဂလီ-ဟိန္ဒူဘာသာကိုးကွယ်သော)လူမျိုး နောင်တွင် (ဘင်္ဂလီ-ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သော) လူမျိုးနှင့် ၁၀ ရာစုမတိုင်မီနှင့် ၄င်းနောက်ပိုင်းရောက်ရှိလာခဲ့သော အစ္စလာမ်ဘာသာ ကိုးကွယ်သည့် အာရဗ်၊ ပါရှန်၊ မဂိုလ်နှင့် ပထန်လူမျိုး တို့၏ ဘာသာ၊ စကား၊ ယဉ်ကျေးမှု များ ရောနှောပေါင်း စပ်ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့သော ကိုယ်ပိုင်စာပေ၊ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာ၊ ကိုယ်ပိုင် ဘာသာ စကားတို့ကို သီးခြားလွတ်လပ်စွာ ပိုင်ဆိုင်သောလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ရိုဟင်ဂျာ တို့သည် အာ(ရ်)ကန်(ရခိုင်)ဒေသတွင် ရခိုင်(ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သောလူမျိုး) တို့နှင့် သီးခြားစီ အတူတကွ နေထိုင် လျှက်ရှိပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာတို့၏ အထွေထွေလူ့အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက် ခံနေရခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာ့မိသားစု တစ်ရပ်လုံးက ၀ိုင်းဝန်း ကယ်တင်ပေးနေသည့် အချိန်အခါ လည်းဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသား ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတို့သည် ခေတ်သစ်မြန်မာ့ လူ့ဘောင်စနစ် တစ်ခုအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နေကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
“ရိုဟင်ဂျာထုတစ်ရပ်လုံး ဗဟုသုတအဖြာဖြာ တိုးပွားကြပါစေ။”
ရိုဟင်ဂျာများသိထိုက်သောသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ (အပိုင်း ၁)
ရိုဟင်ဂျာများသိထိုက်သောသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ (အပိုင်း ၂)
ရိုဟင်ဂျာများသိထိုက်သောသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ (အပိုင်း ၃)
ရိုဟင်ဂျာများသိထိုက်သောသမိုင်းဖြစ်ရပ်မှန်များ (အပိုင်း ၄)
This entry was posted on March 6, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← လာမည့် ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ယူရို ၆ ဒသမ ၅ သန်း ကူညီထောက်ပံ့ရန် လျာထားကြောင်း
ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတ ဟူဂိုချားဗက်ဇ် ကွယ်လွန် (၅၈နှစ်) →